သင်စွဲနေသည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုမည်သို့ဖြတ်မည်နည်း (အပြာ၊ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ စသည်ဖြင့်) - Brain On Porn
သငျသညျ (စသည်တို့ကို porn, မူးယစ်ဆေးဝါး, အရက်) စွဲဖြစ်ကြသည်ဘာမှဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ငါတစ် ဦး toke ရှိသည်ငါနိုးလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်တိုကင်တစည်း။ ညအိပ်ရာမဝင်ခင်အိပ်ရာမ ၀ င်ခင်အထိတစ်နေကုန်မှာဆက်လုပ်ပါ။
ငါရရှိခဲ့ပါတယ် (နှင့်ငါတစ်စုံတစ်ဦးကကျွန်တော့်အသက်ကိုများအတွက်အလွန်ကောင်းသောဝင်ငွေရရှိခဲ့သည်) တိုင်းအားလပ်ချိန်မှာ $ 100 ဒါပြောဆိုရန်, အိုးထံသို့သွားလေ၏။
ငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 16 သို့မဟုတ် 17 ခဲ့အချိန်ကနေ 24 အကြောင်းကိုမှတိုင်းနှိုးနာရီသောက်သည်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့? အကြိမ်တစ်ဦးကနံပါတ်။ ပိုပြီး5ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထက်ရက်ပေါင်းကြာမြင့်ဘယ်တော့မှမ။
ဦး နှောက်သည်စွဲလမ်းမှုကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်သည်။ "toke တစ်ခုမှမနာပါဘူး" လို့ပြောလိမ့်မယ်။ သင်လေ့ကျင့်ခန်းကိုငါသိ၏။ ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်အတူအမြဲတမ်းအဆင်သင့်။
ကျွန်ုပ်သည်အောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမလိုအပ်သော (သို့) အလိုမရှိကြောင်းနှင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကိုမလွှဲမရှောင်သာသိသည်။
အရမ်းခက်တယ် လတိုင်းလတိုင်းအတွက် Flatlining ၏။ ဘဝအတွက်မီးပွားမရှိ။ ဒီမိန်းကလေးအသစ်နဲ့ငါတွေ့ပြီးငါ့အာရုံတွေသူမအပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ သူမသည်ရည်းစားတစ် ဦး အနေဖြင့်ဆေးခြောက်စွဲခြင်းကိုသူမလိုချင်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိသောအချက်မှာကျွန်ုပ်အားသူမပြောပြခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ဆေးခြောက်စွဲခြင်းကိုဖော်ပြခြင်းမပြုသော်လည်းကျွန်ုပ်အားရပ်တန့်ရန်နောက်ဆုံးလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။
တော်တော်များများကိုယ့်သူမ၏တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနေ့ကိုငါသောက်သည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်ခဲ့သည်။ သောကြောင့်သူမ၏၏, ငါသည်ကိုယ်အသက်ကို refocus နိုင်ခဲ့သည်ဆင်းလိမ်ဘဲ, relapse, etc
မကြာသေးမီကငါအရက်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါလပေါင်းများစွာငါ့ဘဝ၌အချည်းနှီးခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါနောက်ထပ်သောက်စရာဘူး။ ငါဆေးခြောက်နှင့်အတူငါစွဲလမ်းမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ငါကငါ့ဘဝကိုအဟန့်အတားခံစားရတယ်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်3သို့မဟုတ်4ပင်ညအချိန်တွင်5သောက်စရာမပါဘဲတစ်ရက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်ငါအမြဲတမ်းလိုချင်သောခံစားချက်မကြိုက်ဘူး ။
ရှိသမျှတို့ကိုငါစွဲလမ်းမှုကိုလျှော့ဗလာသငျသညျအရွက်လမျး၌တူညီသောဖြစ်ကြောင်းထင်, အနိမ့် dopamine နှင့်လမ်းမရှိသောပေမယ့်မှတဆင့်လယ်ထွန်။ ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲငါဂယ်ရီနှင့် Marnia မှ YBOP အပေါ်ကဒီမှာလေ့လာသင်ယူရသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကို wired သည်မည်မျှနက်ရှိုင်းစွာ၏အခိုင်အမာများမှာထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့သော့ကိုအမြဲဒီအသည်: အခြားအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူစွဲအမူအကျင့်အစားထိုးလိုက်ပါ။ ငါကိုအာရုံစိုက်ဖို့ငါ့အသစ်ကိုရည်းစားရှိခဲ့နှင့်ဤဆေးခြောက်လှယျကူဖြတ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
PMO ဖြည့်ထားသောလေဟာနယ်ကိုအစားထိုးရန်အပြုအမူအသစ်တစ်ခုကိုရှာရန်လိုသောကြောင့်၊ ကောင်မလေးမရှိသော PMO မှထွက်လာသောလူငယ်ယောက်ျားလေးများမှာခက်ခဲသည်။
ဒါကိုဒီလိုကြားဖူးတယ်။ သင်၌ဥယျာဉ်တစ်ခုရှိပြီးပေါင်းပင်ဟောင်းတစ်လုံးလည်းရှိ၏။ သင်၏ပန်းပွင့်နံဘေးတွင်အပေါက်ကြီးတစ်ခုရှိနေပြီ ဖြစ်၍ သင်တစ်ခုခုကိုထည့်ရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်အခြားပေါင်းပင်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်။
အပြုအမူအစားထိုးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကအခြားအရာတစ်ခုခုနှင့်တကွ, စွဲအမူအကျင့်, အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်: ဒါကအကြီးမားဆုံးသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့စွဲအမူအကျင့်သင်တို့အဘို့အဘယ်သို့ပြုရပါသနည်း? ကြှနျတေျာ့အမှု၌, ဆေးခြောက်, ငါ့ကိုကာလတိုကို un-ပျော်စရာဖြစ်ရပြီလိုပေမယ့်ငါ့ကိုအများကြီးရှိရာသို့အလျင်အမြန်ဘဝမှာကောင်းသောအပြုသဘောအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ဘို့ရေရှည်အလုံအလောက်နာကျင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ပျင်းတားဆီးကူညီပေးခဲ့သည် (အမြိုးသမီးမြားတှေ့ဆုံနဲ့တူ။ )
သင် PMO သို့မဟုတ်ပေါင်းပင်သို့မဟုတ်အရက်ကိုဖြတ်မည်ဆိုလျှင်သင်၏ဘ ၀ တွင်မည်သည့်အပေါက်ပေါက်မည်ကိုသတိပြုရန်လိုပြီးသတိရှိရှိဖြည့်ရန်လိုသည်။ ကျန်းမာသောအရာကိုရွေးချယ်ပါ၊ it တစ် ဦး စွဲဖြစ်လာသည်။ ငါအခုအင်တာနက်မှာအချိန်သိပ်မကုန်တော့ဘူး၊ ငါစိတ်လှုပ်ရှားစရာအသစ်တွေအတွက်နေရာပွင့်လာတယ်။ ငါထင်တာကအပြုအမူဟောင်းကိုအစားထိုးလုပ်ဖို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရပ်ဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်။
ယောက်ျားတွေပြန်ကောင်းလာရင် PMO ရဲ့အပြုအမူတွေအစားထိုးထားတဲ့အသစ်တစ်ခုကိုတွေ့ပြီ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆက်ဆံရေးဒါပေမယ့်ငါအမြဲမပေးဆိုပါစို့။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုကအစားထိုးရမယ်။ မင်းက PMO ကိုစွဲစွဲလမ်းနေတယ်၊ ​​ခင်ဗျားမှာဆက်ဆံရေးမရှိဘူးဆိုရင်၊ သို့သော်သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအမှာစာမှာ PMO အချိန်နှင့်အစားထိုးရန်တစ်ခုခုကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
သူတို့ကသူတို့က“ အဆင်ပြေတယ်၊ ​​အနည်းငယ်ကြည့်စမ်းပါ” သို့မဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကိုပြောတဲ့အခါ ဒါကြောင့်လုံးဝအပြည့်အ ၀ နှုတ်ထွက်လိုက်ခြင်းဟာလုံးဝကင်းလွတ်တဲ့အပြုအမူဟာ IMHO ရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွန့်လွှတ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ။
အောင်မြင်သူများသည်သူတို့၏အကောင့်အမြောက်အများကိုယခုဤတွင်ဖတ်ပြီးပါပြီ၊ လုံးဝ၊ လုံးဝ၊ လုံးဝ၊ ၁၀၀% ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ပြန်လည်ဖြစ်ပွါးမှုရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောမတော်တဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတစ်မျိုးတည်းရှိသော်လည်းအချို့သောအလှအပများကိုလေ့လာခြင်းသည်အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။
သငျသညျ PMO ဖြတ်နေတယ်ဆိုရင်သောသင်အပြုသဘောစဉ်သိလျက်နေပါစေသင့်ဦးနှောက်သင့်ကိုပြောပြမှာအဘယ်အရာစဉ်စဉ် porn ကိုကြည့်ဘယ်တော့မှရမယ်ဆိုလိုသည်။
လူတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုယုံကြည်ကြတာလဲ။ သတင်း flash: အတွေးများလိမ်။
သငျသညျဖြတ်ဖို့လုံးဝကျူးလွန်နေကြသည်လျှင်, သင်သင်တဦးတည်းသူတို့ကိုကြည့်ရှုအဆင်ပြေ IS ထင်ရပါလိမ့်မယ်နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့် သငျသညျကွညျ့ရှုမည်မဟုတ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေ။ သင့် ဦး နှောက်ကသင့်ကိုအရာအားလုံးကိုပြောပြလိမ့်မယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်သာ `` အီမာဆန်ပြောတာကဒီလိုဖြစ်မယ်။ ငါ့အကြံအစည်တို့သည်ငါ့ကိုလွင့်တတ်ကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ထို့နောက်သင်သည်သင်၏လိင်အင်္ဂါများသို့ရေအေးကိုပစ်လိုက်ပြီးထွက်ခွာသွားသည်ဖြစ်စေ၊ မင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီ၊ နံနက် ၃ နာရီတောင်မှတောင်မင်းကိုဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်သည်ယခုအချိန်တွင်သွေးဆောင်မှုမှသင်ကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
ဒါကယောက်ျားတွေကဒီကိုဖြတ်ပြီးရရှိသွားတဲ့အရာပါပဲ။ သင်၏အတွေးများလိမ်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်မည်သို့ဖြစ်သွားမည်ဆိုသည်မှာဤအချက်ပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင့်ကိုလိမ်နေကြောင်းသင်သဘောပေါက်မည်လား၊ ထိုခဏခြင်းတွင်သွေးဆောင်မှုမှသင်ကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားပစ်မည်လား။
ယနေ့ငါဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးဆေးခြောက်နှင့်အရက်အကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။ ဤအရာများသည်အလွန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့တာမှာ ၁၀၀% လုံးလုံးနုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Bong hit သို့မဟုတ်တစ်ချက်တည်းရိုက်ရန်သွေးဆောင်ခံရသောအခါကိုယ့်ကိုယ်ကို "ဦး နှောက်၊ မင်းဟာနောက်တစ်ခါလဲလျောင်းနေတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားအရာတစ်ခုကို လုပ်၍ စုံစမ်းခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုသွေးဆောင်မှုမှဖယ်ရှားခဲ့သည်။